Al-shabaab oo dib u qabsaday Dhoobley & dhiillo colaadeed oo halkaasi ka taagan. – Radio Daljir
Febraayo 19, 2010 12:00 b 0
Dhobley, Feb 19 ? Xoogagga ururka Al-shabaab ayaa maanta si nabadgalyo ah oo aan dhiig ku daadan kula wareegay magaaladda Dhoobley oo ka tirsan gobolka J/hoose halkaasi oo shalay gacan ku haynteeda uu la wareegay ururka Xisbul-Islaam.
Ciidamada Al-shabaab ayaa saaka sabaxnimadii hore galay magaalada iyagoo isku gadaamay magaalada iyo daafaheeda sida ay idaacadda Daljir u sheegeen goob joogayaal reer Dhoobley ah oo aan khadka teleefoonka kula xiriirnay.
Ciidamadii shalay qabsaday magaalada ee Xisbul-Islaam, ayaa xalay habeennimo iskaga baxay magaalada, iyadoo arrintaasna lagu micneeyey la socoshada weerar rogaan celis ah oo laga filayey ciidamadii Al-shabaab ee shalay dagaalka looga saaray Dhoobley.
Xaaladda magaalada ayaa maanta ahayd mid deggan inkastoo ay halkaasi ka taagan tahay dareen colaadeed oo looga cabsi qabo in ay halkaasi mar kale isku fara saaraan, xoogaggii shalay ku dagaallamay ee Al-shabaab iyo Xisbul-Islaam.
Dagaalkii shalay oo ahaa mid aad u xoogganaa la iskuna adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa sababay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira oo soo kala gaaray dhinacyadii diriray iyo dadkii shacabka ahaaba.
Inta la xaqiihiyey 12 qof ayaa ku dhintay dagaalladii shalay, waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 20 qof sida qaar ka mid ah dadka deegaanku ay noo xaqiijiyeen, waxaana wali magaalada Dhoobley laga dareemayaa raadadkii dagaalladii shalay ay ku reebeen.
Sikastaba ha ahaatee magaalada Dhoobley ayaa hadda isku badashay magaalo colaadeed, waxaana ka qaxay dadkii shacabka kuwaasi oo haatan la tilmaamayo xaalado nolol-xumo oo qallafsani in ay soo food-saartay.
on Wasiiru dawlaha Qorshaynta & Xiriirka Caalamiga ah ee Puntland Prof. C/Qadir C. Xaashi oo la kulmaya qurbajoogta Puntland ee Minnesota, 3-da July.[email protected]l.com